Fampahalalana momba ny fizahantany sy ny fialam-boly | Reef Resilience
Ny fialam-boly dia afaka manimba ny vatohara amin'ny alàlan'ny:
Ny fanimbazimbana ny zanatanin'ny mpanjono sy ny fahasimban'ny teboka amin'ny fifandraisana mivantana toy ny mandeha, mihetsika, mitraka, mitsangana, na mifandray
Fanimbazimbana na famongorana ireo zanatany karaoty sy ny fahavoazana amin'ny vatan'ny vatofantsika
Fiovana eo amin'ny fiainana an-dranomasina miaina amin'ny sakafo na fanorisorenan'ny olombelona
Tratra sy korontana napetraka tao amin'ny tontolo an-dranomasina
Snorkel, Scuba, ary Trampling
Ambony: Mpihady tsy manan'aina manimba ny vatohara any Manado, Indonezia. Sary © Shen Collazo / Marine Fotobank
Ambany: Ny mpizahatany manitsakitsaka ny harambato ao amin'ny National Park Park, Ejipta. Sary © Howard Peters / Marine Photobank 2011
Maro ny fanadihadiana no nanamarina ny fiantraikany amin'ny vatohara ho an'ny vatoaratra sy ny mpitaingina. Mety hiteraka fahasimbana avy amin'ny fanitsian-dalam-poko izy ireo, manosika na mitazona ny haran-dranomasina, misintona fitaovam-piadiana, ary mandohalika / mijoro eo amin'ny vatohara. Tsy ny olon-drehetra ihany no miteraka fahasimbana toy izany.
Ireo mpanarato SCUBA dia manana fiantraikany bebe kokoa amin'ny vatohara toy ny mpikorisa, indrindra fa ny akanjo fitondra amin'ny fonosana sy ny mpaka sary. ref Izany dia satria mpitrandraka ny ankamaroan-toeran'ny rano amin'ny moron-dranomasina, ary ny fahasimbana amin'ny vatohara dia voafetra ho any amin'ny faritra misy rano izay ahafahan'ny snorkelers mivantana na manapaka ny haran-dranomasina. ref
Ny fitsaboana dia manolotra soso-kevitra tsy fantapantatra noho ny antony lehibe kokoa noho ny mpitaingina maro hafa, ary ny ampahany kely amin'ny mpitaingina ihany no tompon'andraikitra amin'ny ankamaroan'ny fiantraikany. ref Ny antony hafa ara-tsosialy hafa dia fantatra fa mety hisy fiantraikany amin'ny fahasimbana amin'ny vatohara. Ohatra, ny fikarohana vao haingana dia mampiseho fa ny fiavonavonan'ny mpitsidika dia mety hisy fiantraikany bebe kokoa amin'ny fahasimbana amin'ny haran-dranomasina noho ny antony hafa toy ny traikefa anana sy ny fahaiza-manao. ref Izany dia manolo-kevitra fa ny fiheveran'ny mpampiasa, ny fahatsapana ary ny finoana dia manan-danja toy ny fiantraikan'ny fialana amin'ny fialamboly. Manome sosokevitra ihany koa izy fa amin'ny sehatra sasany, ny tetik'asa fitantanana dia mety mila lasibatra amin'ny vondrona mpampiasa manokana mba hampihenana ny fahavoazana amin'ny vatohara.
Ny haran-javamaniry dia mampiseho fahasimbana avy amin'ny fiarovana tsy mitandrina; Ny sary dia nalaina dimy taona taorian'ny fisehoan-javatra ary manasitrana kely na tsy misy fanasitranana. Sary © Joe Bartoszek 2010 / Marine Fotobank
Ny fanitsakitsahana ny haran-koditra dia mahazatra ihany koa amin'ny trano fisakafoanana marobe, ary miteraka fahasimbana goavana any amin'ny faritra avo lenta amin'ny fampiasan'ny olombelona.ref Ireo toerana fidirana an-dalampanorenana izay ahitana olona mijoro na mandehandeha miditra na mivoaka ny rano dia mora vaky amin'ny fanosihosena; Ao anatin'ireo faritra ireo dia mety hahatratra ny haavony avo lenta toy ny 100% ny fahafatesan'ny vatohara amin'ny fifandraisana amin'ny substrate. ref Na dia any amin'ny toerana mety tsy mety maty aza ny fahafatesana, ny fanitsakitsahana dia mety hiteraka fihenan'ny vokatra fanondrotana ho an'ny vatohara.ref
Ny fiantraikan'ny fahasimban'ny vatohara avy amin'ny mpitsidika avy amin'ny alika dia nanentana ny hevitra mpisitrika mitondra fahafahana. ref Na dia nampiharina tamin'ny haran-dranomasina maromaro nandritra ny tropika aza io fomba fanao io, dia ny fikambanana mpiaro ny fikarohana sasany dia manosika ny fanombantombanana ny fahaiza-manao amin'ny fitondrana. ref Fandraisan'anjaraPDF) dia mety ho sarotra; Miankina betsaka amin'ny toe-piainana ara-tontolo iainana amin'ny harambato, ny mety hisian'ny vatohara, ary ny fitondran'ny vahiny.
Ny vatofantsika amin'ny vatoaratra dia mety hiteraka fahasimbana goavana amin'ny haran-dranomasina, anisan'izany ny fisintahan'ny korontana sy ny fambolena. Ny vatofantsika lehibe sy ny rojo mavesatra dia afaka manapaka na manilika ny haran-dranomasina, ka mahatonga ny faritra midadasika amin'ny vatohara ho simba. Raha toa ka miteraka fahasimbana kokoa ny sambo kely, dia mety hisy fiantraikany goavana amin'ny haran-dranomasina koa ny faritra misy sambo mendrika. Nihena ny fiantraikan'ny fanamafisana tamin'ny alàlan'ny fananganana tohodrano fanatobiana tany amin'ny toerana maro, saingy ny fikarakarana ny lakana kely amin'ny haran-dranomasina dia mbola olana goavana amin'ny vatohara any amin'ny firenena an-dalam-pandrosoana maro. ref
Mety hijanona mandritra ny taona maro ny fanimbana ny haran-dranomasina amin'ny haran-dranomasina. Ohatra, ny voka-piteran'ny vatofantsika teo amin'ny nosy Virginiana dia nitarika fihenam-bidy ny vatoharan-dranomasina, raha oharina amin'ny vatam-panafody amin'ny vatohara tsy misy ala izay nijanona folo taona taorian'ny nitrangan'ilay loza.ref Ny fiarovana ihany koa dia manimba ireo toeram-ponenana misy ny vatohara toy ny ahitra, izay manome toerana lehibe sy zenetika manan-danja amin'ny karazana vatohara maro.
Ny fikaon-java-bary dia mety miteraka vokatra mahatsiravina eo amin'ny vatoharan-dranomasina, fa tsy ny famotehana sy ny fanodikodinana ny haran-dranomasina, fa ny fanimbana ny sehatry ny vatohara (ohatra, any Florida sy Bermuda). ref Na dia betsaka amin'ireo fahasimbana goavana amin'ny vatohara aza dia nateraky ny mpikatroka, toy izany koa ny fahasimbana azo avy amin'ny sambo mpitondra lakana. Ohatra, any amin'ireo nosy Virgin, ny sambo iray amin'ny sambo 200 miorina ao amin'ny 4 metatra metatra dia nanimba ireo vondrom-piarahamonina coral teo amin'ny faritra 5,300 metatra tora-droa. ref
Ny fiantraikan'ny toeram-piaramanidina dia mety hivoatra avy amin'ny zato metatra vitsy monja amin'ny vatohara maromaro an-jatony tapitrisa. ref Ny fiantraikany toy izany dia avoaka rehefa mifampiankina amin'ny fiantraikany mifandraika amin'ny fandaniana solika, ny fandefasana ny poizina, ary na dia mihena aza rehefa tsy azo avotana ilay sambo. Ny faktiora izay misy fiantraikany amin'ny fiantraikan'ny fiantraika dia ny habetsaky ny sambo, ny fonon'ny vatohara amin'ny faritra fifandonana, ny fahafaha-manao ara-toekarena ao amin'ny faritra amin'ny adihevitra momba ny fifandonana, ny toetr'andro amin'ny toetr'andro, ary toe-karena ekolojika misy fiantraikany (Ohatra: ny fisian'ny anton-javatra izay manohana ny fametrahana sy ny fitomboan'ny vatohara). ref
Fiovana eo amin'ny fitondran'ny fiainana an-dranomasina
Ambony: Mpizaha tany manome sakafo trondro haran-dranomasina tany Hawaii.
Ambany: Tonga any an-tsahan'i Hawaii ny mpizahatany iray.
Sary © Ziggy Livnat, Ho an'ny Ranomasimbe / Marine Photobank
Ny fiaraha-miaina amin'ny fiainana an-dranomasina, toy ny fikarakarana trondro sy ny fihaonana amin'ny karazam-piaviana karazany na tsy fahita firy, dia fientanam-bahoaka mihamitombo hatrany ho an'ny mpitaingina sy mpikapa. Ny fiantraikan'ny fialam-boly momba ny tontolo iainana sy ny karazana sambo dia mety ho vokatry ny fanoherana na ny fanorisorenana, na amin'ny famatsiana ny fiainana an-dranomasina. Amin'ny toe-javatra sasany, ny tondra-drano dia aseho amin'ny fampihenana ny habetsaky ny trondro amin'ny tranokala avo lenta (oh .: Kaneohe Bay, Oahu),ref raha mbola misy any amin'ny faritra hafa, dia tsy misy vokany manan-danja eo amin'ny vondrom-barotra momba ny haran-dranomasina (ohatra, Bonaire). ref
Ny famatsian-tsakafo dia naseho ka niteraka fiovana goavana teo amin'ny fitondran'ny trondro, anisan'izany ny fiovan'ny fotoana laniny amin'ny fahazoana sakafo, ny haben'ny sakafon'ny biby, ny asa fanaovan-tsoa, ​​ny lanjan'ny mponina, ny fomba fifindra-monina, ary ny fananganana karazana noho ny fitomboan'ny ireo karazana lehibe kokoa sy mahery kokoa. ref Ny fikarakarana trondro dia nampiseho koa ny fampitomboana ny fihetsika mahery vaika amin'ny karazana lehibe kokoa ary mety hahatonga ny maro ho voakaikitra.
Ny fikarohana dia mampiseho ny fiantraikany ratsy fandotoana avy amin'ny fandotoana sy ny zavatra simika amin'ny haran-dranomasina, fa ny fikarohana voafetra dia miantso ny anjara asan'ny fialam-boly mampitombo ireo vokatra ireo. Ny boatin-dalamby dia afaka mamela ny fako sy ny fandoavam-bolamena izay mety hanimba ny vatohara, indrindra any amin'ireo baskety vita amin'ny fivoahan'ny rano. Ireo mpanafika antifouling dia mety hanimba ny tontolo iainana an-dranomasina. Ohatra, ny tributyltin (TBT) dia ampiasaina amin'ny loko mampiavaka ny sambo, dock, ary trondro mena mba hanakanana ny fitomboan'ny zavamaniry an-dranomasina ary tena mampidi-doza amin'ny zavamiaina an-dranomasina sasany. Ny masoandro ihany koa dia mety hiteraka fahavoazana goavana ho an'ny vatohara any amin'ny faritra manjary avo lenta amin'ny fampiasan'ny olona fialam-boly. ref
Karazan-javamaniry Mety hiparitaka amin'ny fizahan-tany fizahan-tany sy ny fialam-boly toy ny fitaterana rano fisotro madio, fanodikodinan'ny sambo mpitondra lakana, ary ny fivoahana amin'ny sambo fialamboly (ohatra, avy amin'ny vala, motera ivelany, loharanom-panafody, làlan-drano, fitaovana fanjonoana sy ny korontana).
Ny fomba lehibe indrindra mitantana asa fialamboly Ao amin'ny faritry ny haran-dranomasina ny fampihenana ny habetsaky ny fampiasana any amin'ny toerana sasany (ohatra amin'ny alalan'ny famerana ny fidirana) ary ny fampihenana ny fiantraikan'ny fampiasana amin'ny alàlan'ny fanovana amin'ny fitondrantenan'olombelona (ohatra, ny fanabeazana ny haran-dranomasina mba hanakanana ny fihoaram-pefy, ary ny fametrahana fitsipika mandràra ny hetsika sasany manimba) .
Famerenana ny loharanom-baovao sy ny fiantraikany amin'ny fiantohana amin'ny tsy fahampian-tsakafo amin'ny Ecosstems Coral Reef
Kianjan'ny haran-dranomasina Hawai'i: Ny laharam-pahamehana amin'ny fitantanana any amin'ny Nosy Hawaiian Main, 2010 - 2020
Ireo safidy fitantanana mba hisorohana ny fiarovana, ny fiorenana sy ny fiantraikany amin'ny harena voajanahary sy harena fototra ao Atsimo-Atsinanan'i Florida
WIOMSA MPA Toolkit: Mpitsidika sy fitarihana